हाँसीखुसी अमेरिका पुगेका गणेश तिवारीले गरे साथीलाई भिडियो कल गरेर गरे हेर्दाहेर्दै आत्महत्या ! – PathivaraOnline
Home > समाचार > हाँसीखुसी अमेरिका पुगेका गणेश तिवारीले गरे साथीलाई भिडियो कल गरेर गरे हेर्दाहेर्दै आत्महत्या !
साथीसँग फोनमा कुरा गर्दागर्दै एक नेपाली युवाले अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा पासो लगाएर आत्महत्या गरेका छन् । सन्नीभेल सहरमा बस्दै गरेका २४ वर्षीय गणेश तिवारीले बिहीबार आत्महत्या गरेका हुन् । उनी नवलपरासीका हुन् ।
पछिल्लो तीन वर्षबिचमा क्यालिफोर्नियामा चारजना विद्यार्थीले आत्महत्या गरिसकेका छन् । गत सेप्टेम्बरमा सानफ्रासिस्कोको गोल्डेनगेट पुलबाट हामफालेर अर्का एक नेपालीले आत्महत्या गरेका थिए । नयाँ पत्रिकामा खबर छ
झापामा एकैपरिवारको ४ जनाको जलेर मृत्यु प्रकरण, यसकारण रहस्यमय बन्दै
पथरी काण्ड भन्दा खतरा काभ्रे सरिता हत्या काण्ड:दुई पक्ष बीच अस्पतालमै पर्यो हात हालाहाल(भिडियो)
बिहानै भक्तपुरमा स्कुटर दुर्घटना भएपछि आयो यस्तो दुःखद निधनकाे खबर